नेपालका ९९ प्रतिशत मिडिया र पत्रकार पार्टीको दानापानीमा छन्
नेपालीहरुकाे एउटा वानी साह्रै खराव भएर निस्कियाे । कसैले कागले कान लग्याे भनेपछि त्यसकाे पछाडी कुँदि हाल्ने । हरेक कुरामा आफ्नाे सामान्य विवेक पनि प्रयाेग नगर्ने । वजारमा च्याउसररी मिडीयाहरु उम्रेका छन् । ति मध्ये ९९% मिडीयाहरु कुनै न कुनै पार्टीकाे दाना पानीमा चलेका छन् । तिनीहरुकाे काम भन्या आफ्नाे पार्टी र नेताकाे भजन किर्तन गाउने अनि अरु पार्टी र तिनका नेताका खाेइराे खन्ने र उनिहरु विरुद्ध विष आेकल्ने । हुँदै नभएका निराधार कुराहरुलाइ पनि फुलवुट्टा भरेर हाे झैं वनाउने र आम मानिसहरुलाइ भ्रममा पारीराख्ने । वजारमा त्यहि निराधार हल्ला वढि फैलन्छ । त्यसैलाइ सवैले सेयर गर्छन अनि मरुन्जेल जे मनपरी गालि गर्छन । तर वास्तविकता कस्ले वुझ्ने ? सवै कसै न कसैकाे हनुमान छन् । फेसवुकमा तिनै हनुमानहरु पक्ष र विपक्ष भएर हिलाे छ्यापा छेप गर्छन् । अव त नेताहरुले वाेलेकाे प्रतक्ष्य भिडीयाे नहेरुन्जेल कुनै नेताकाे वारेमा कुनै पनि कमेन्ट नगराैं जस्ताे भइराख्या छ ।
फिलिपिन्स महिला जाेयाकाे वारेमा पनि त्यहि लागु हुन् लाग्या छ । अस्ति सम्म चितवनकाे सामाजिक संस्था आदर्श गृहकाे भजन गाए अन्धभक्तहरुले । फेरी आज एउटा मिडीयाले त्याे संस्थालाइ आराेप लगाएर लेख्या रहेछ । हनुमानहरु फेरी आदर्श गृह डलरमा विकेर जाेयालाइ जवरजस्ति फिलिपिन्स पठाएछ भन्दै छन् । आदर्श गृह अस्ति सम्म साह्रै राम्राे संस्था थियाे । आज तिनै हनुमानले एउटा मिडीयामा न्युज देख्दैमा त्यस्लाइ जे मनपरी वाेल्ने ? दुइजिव्रेहरुकाे जिव्राे थुतिदिने मान्छेकाे खाँचाे पाे हुन् लाग्याे त ! नेपाली दिदीवहिनीहरु विदेशका गल्लिमा रुँदै हिड्दा खुचिंग भन्दै हिड्छन् रे नपुसकहरु । हामी नेपालीलाइ भन्दा विदेशीलाइ विश्वास गर्दा यस्तै फल मिल्छ भन्दै खिल्लि उडाउँछन् रे वतासेहरु । नेपाली दिदीवहिनीले विदेशी भुमिमा वाध्यतावस् भुँडी वाेक्न वाध्य भएर रुँदै देश फर्कदाँ तिनका वच्चालाइ आमाकाे नामवाट नेपालकाे नागरिकता दिन हुन्न भन्दै फेसवुकमा खुव भुक्याथे भुकन्तेहरु । अहिले आएर जाेयाकाे त्यति धेरै माया लागेछ ? ति वच्चाहरुकाे खुव माया लागेछ ? हाम्रा आफ्नै दिदीवहिनी प्रति दया माया, लाज सरम , घिन, आदर सद्भाव नजाग्ने यिनीहरुलाइ कसरी जाेया प्रति कसरी दया जाग्याे ? याे भन्दा विचित्र अरु के हुन् सक्छ याे दुनियामा ?
मैंले फेसवुकमा धेरैदिन देखि खुव राेइला देखेँ अनि सुनें जाेयाकाे वारेमा । सवैकाे विचराहरु पनि देखियाे । खप्नै सकिन र यति लेखे । अर्काे कुरा मिडीयाले कुनै वेला वावुरामलाइ पनि साह्रै उमाल्याे र पछार्याे । के पि वली पनि वेलैमा सचेत हाेउन । एमाले कार्यकर्ताका अहिले धेरै अनलाइन उम्रिएका छन् वजारमा । आेलिलाइ अहिले तिनैले हिराे वनाइरहेकाे छ । सँधै याे संभव हुँदै हँदैन । वावुराम अर्थमन्त्रि हुँदा जुन हाइहाइ थियाे पछि प्रधान्मन्त्रि हुँदा आफ्नै पार्टाका केहि व्यक्ति र मिडीया लाएर तिनकाे पत्तासाफ पारे ।
मिडीया जाइलागेछि नेपालमा जस्ताे सद्दे मान्छेपनि रद्दीकाे टाेकरीमा मिल्कने रहेछ । जनता भेडाे भएपछि देशले अस्थिरता भन्दा अरु के नै पाउनेरहेछ र ? ???